जन्म देखी मृत्‍यु सम्म छोरीको नाम थर उही हुन किन सक्दैन ? रेखा थापा - Mitho Khabar
January 30, 2020 mithokhabarLeaveaComment on जन्म देखी मृत्‍यु सम्म छोरीको नाम थर उही हुन किन सक्दैन ? रेखा थापा
काठमाडौं १६ माघ / समसामयिक बिषयमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले सामाजिक सञ्जालमा छोरा र छोरी बिच किन भेदभाव भन्ने बिषयमा एक लेख लेखेकी छन् । सडक देखि चलचित्र सम्म नारी माथि हुने शोषण विरुद्ध आवाज उठाउने अभिनेत्री थापाले छोरा र छोरी बिचको परिचयलाई संक्षिप्तमा यसरी ब्याख्या गरेका छन् ।
छोरीको परिचय कसै सँग जोडीएर शुरुवात हुन्छ वा उनी आँफैमा पूर्ण मानव हुन ? एउटा पुरुष सन्तान जन्म देखी मृत्‍यु सम्म एउटा परिचय र पहिचानको सुबिधा बाँच्न पाइरहदा, सोही घर कि छोरीले आफ्नो परिचय बनाउदै भात्काउदै गर्नु पर्ने किन हुन्छ? के परिचयको समर्पण र त्याग छोरीको निम्ती अपरिहार्य आवश्यकता हो ?
जन्म दर्ताको किताब, बिद्यालयको भर्ना, योग्यताको प्रमाण, नागरिकतामा उल्लेखित नाम थर र सवारि चालक अनुमती पत्रमा भएको नाम भात्काउनु जरुरी छ? विवाह र परिवार रुपी संस्थाको हिस्सा बन्नको निम्ती छोरीको परिचय भत्किनु उपलब्धी हो ?
महिला बन्ने योग्यता भित्र त्याग अर्थपूर्ण गुण हो ? पटक पटक बन्नु र भत्किनु पर्ने यो लीला भित्र हामी छोरीको जन्मसंगत स्व अस्तित्व देख्छौ? छैन, किनकी अहिले छोरी भएर जन्मने, हुर्किने र शिक्षित हुने बिद्यालयको पाठ्यक्रम उनिहरुको स्व अस्तित्व मार्ने ढाचामा बनेको छ । छोरी भएर जन्मिने हरेक मानवले गुज्रिनु पर्ने बाटो जन्जालको छ ।
बुहारी, आमा र महिला सदस्य हुनु पहिले एउटा छोरीले त्यती अबरोध र अनुभव झेल्नै पर्छ जती एक पुरुषले जीवनकाल भर भोग्नु पर्दैन । समाज ले महिला बनाउन तालिम दिने गरी तयार गरेको व्याकरण र शब्दकोष यस्तै रहुन्जेल कोही छोरी आफ्नो पहिचान र परिचयमा आत्मनिर्भर हुने छैनन ।
सामाजिक पृष्‍ठ भुमिमा हामी समानता को खेल खेल्न सक्छौ त? बिचार गर्न जरुरी छ कि जन्म देखी मृ’त्‍यु सम्म छोरीको नाम थर उही हुन किन सक्दैन?